भूकम्पपीडित कर्जामा नसोचिएका पक्ष | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण भूकम्पपीडित कर्जामा नसोचिएका पक्ष
on: १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ०६:३० लेख | दृष्टिकोण
भूकम्पपीडित कर्जामा नसोचिएका पक्ष
विनाशकारी भूकम्प–२०७२ गएको ३ वर्ष ४ महीना बितिसकेको छ । तर, अझै पाल र त्रिपालमुनि बस्नेहरूको दुःख उस्तै छ । यतिन्जेलसम्म भत्किएका घर बनिसक्नुपथ्र्यो । भूकम्पपीडितहरूको जीवन सामान्य बनाउनु त कता हो कता, पाउनुपर्ने अनुदानसम्म पनि अझै पाउन नसकेका समाचार आइरहनुले के देखाउँछ भने सरकार कानमा तेल हालेरै बसेको छ । ऊ संवेदनशील हुनैसकेको छैन । अनुदानको कुरा त परै जाओस् बैङ्कबाट कर्जा लिएर जसोतसो घर बनाउनेहरू पनि यतिखेर नयाँ सङ्कटमा परेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले त्यसबेला अर्थात् सरकारले भन्दा पनि अगाडि भूकम्पपीडितहरूका लागि बैङ्कहरूबाट २ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेर निकै स्याबासी कमाउन खोजेभैंm लाग्थ्यो । हुन त त्यति ऋणले काठमाडौं खाल्डोमा खासै राहत नपुग्ने कुरा यस लेखकले यही अभियानमार्पmत त्यसैबेला उठाएको थियो र यसका लागि बैङ्क होइन, सरकारले नै एक विशेष खालको कोषबाट रकम परिचालित गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको पनि थियो । केन्द्रीय बैङ्कबाट प्रदान हुने पुनर्कर्जा नवीकरणसमेत गरेर बढीमा २ वर्षभन्दा अधिक समयका लागि उपलब्ध गर्नै नमिल्ने कानूनी व्यवस्था अहिले पनि यथावत् छ । अहिले जसले त्यसखाले भूकम्पपीडित कर्जा दिएका थिए, अब बजार ब्याजदर तिर्नुपर्छ भनी ऋणीहरूलाई धमाधम कर्जाको ब्याज असुल्न थालेका छन् । अहिले यसै विषयले सदन पनि तातेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले हाल धितो लीलाम नगर्न भनी बैङ्कहरूलाई निर्देशन पनि जारी गरेको देखिन्छ । भूकम्पपीडित कर्जा लिनेहरूले भने आन्दोलनका थप कार्यक्रम बाहिर ल्याएका छन् । केन्द्रीय बैङ्कलाई पुनर्कर्जा १ वर्षका लागि र सरकारले प्रत्याभूति गरेमा अर्को १ वर्षका लागि मात्र प्रदान गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाबारे पक्कै पनि ज्ञान नभएको होइन होला । कानूनमा भएको असहजतालाई चाहेको भए यो समयभित्र सुधार गर्न नसकिने थिएन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि बैङ्कहरूलाई लामो समयसम्मका लागि भूकम्पपीडित कर्जा प्रवाहका लागि निर्देशन दिने केन्द्रीय बैङ्कको अभीष्ट पनि ढुलमुले नै देखियो । २ वर्ष पनि बित्यो । अब केन्द्रीय बैङ्कबाट उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा उपलब्ध हुन नसक्ने भएपछि बैङ्कहरूले धमाधम प्रचलित दरको आफ्नो कर्जाको ब्याज लगाउन थाले । ११ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपलाई कसैले पनि २ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह नगर्ला । एक त वाणिज्य बैङ्कहरूसित लामो अवधिको साधन नै हुन्न । केही प्रतिशत आवधिक निक्षेप १/१ वर्षका लागि भए पनि बाँकी निक्षेपहरूको प्रकृति भनेको निक्षेपकर्ताको कारोबारको व्यवहारमा भरपर्ने हुँदा लामो अवधिका लागि बैङ्कहरूले हत्तपत्त कर्जा प्रवाहमा जोखीम मोल्दैनन् । अहिले यो क्षेत्रमा (२०७५ असारसम्ममा ) कर्जा लिनेहरू १ हजार ११ को सङ्ख्यामा रहेका र तिनमा करीब १ अर्ब ७० करोडको कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । २ प्रतिशतमा लिइएको कर्जाको ब्याज एकाएक ८ गुणाको बढी दरले तिर्नुपर्ने भएपछि त्यस्ता ऋणी आन्दोलित हुनु स्वाभाविकै हो । भूकम्पपीडितहरूका लागि जाने कर्जा विशेष प्रकतिको भएकाले यसलाई सोहीअनुरूप सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । यो काम सरकारकै हो । केन्द्रीय बैङ्कले त राहतसम्मको उपाय खोजेको देखिन्छ । ऊ पनि पुनर्कर्जाको कानूनी व्यवस्थाबारे सरोकारवालाहरूलाई बेलैमा शिक्षा दिनमा भने चुकेकै देखियो ।
बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूबाट केन्द्रीय बैङ्कको नीतिअनुरूप भूकम्पपीडित कर्जा लिनेहरूको वर्तमानको सङ्ख्या उल्लेख्य होइन । गएको १ वर्षमा ( २०७४ असारमा करीब ३ सय ९० जना थिए) करीब सातको सङ्ख्याको वृद्धिलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिँदैन । अब त बैङ्कहरूले बजार ब्याजदर लगाउने अवस्था आएपछि ५ लाखभन्दा बढी भत्किएका घरहरू बनाउन बैङ्क ऋण परिचालन असम्भव नै देखिएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका करीब ८ लाख घरको आँकडाका अघि यो सङ्ख्या मात्र ‘देखाउने दाँत’जस्तो भएको छ ।
बैङ्क र वित्तीय संस्थाको मुख्य/प्रमुख साधनको स्रोत भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप हो । अब त्यस्तो निक्षेपमा आवधिक निक्षेपको अंश २०– २५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन । त्यो पनि १ वर्षभन्दा बढीको निक्षेपलाई बैङ्कहरू प्रोत्साहित गर्दैनन् । त्यसैले ५ वर्षभन्दा बढीको कर्जा लगानीका लागि उनीहरूसित त्यस्तो भरपर्दो साधन हुँदैन पनि । त्यसका लागि उनीहरूले लामो अवधिको कि त बोण्ड कि डिबेञ्चर जारी गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने मात्र ती लामो अवधिका लागि कर्जा व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा हुन्छन् । यसैले हालको स्थितिमा बैङ्कहरूले यस खाले कर्जा प्रवाह गरेनन् भनेर दोष जति बैङ्क र केन्द्रीय बैङ्कलाई दिनु सर्वथा अनुचित हो । सरकारले चाँजोचाहिँ के मिलाउनुपर्थ्यो भने दातृ निकायबाट दीर्घकालीन ऋण परिचालन गरेर बैङ्क/वित्तीय संस्थामार्फत भूकम्पपीडित कर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । गर्न नसक्ने पनि होइन । दाताको भरपर्ने अवस्था रहेन भने पनि उसले बजेट बाँडफाँटका माध्यमबाट केन्द्रीय बैङ्कमार्फत विशेष कोषको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । यसो गर्न नसक्ने होइन । अपजस जति बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई पन्छाएर सरकारचाहिँ यतिखेर पानीमाथिको ओभानो बनेको छ ।
कर्जा भनेको अनुदान/चन्दा होइन । कर्जा भनेको फिर्ता भएर पनि आउनुपर्‍यो । केन्द्रीय बैङ्कको अभीष्ट वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलताको सुविधा दिनेसम्मको देखिन्छ । त्यो पनि कर्जा नै हो । उसले पनि वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता नै माग्छ । उसलाई यतिखेर कानूनी अड्चन पनि छ । भएन, सैद्धान्तिक हिसाबले केन्द्रीय बैङ्कले पुनर्कर्जाजस्तो विषयलाई हलुका रूपमा लिनै मिल्दैन । भनाइको तात्पर्य के हो भने त्यो सरल र सजिलो तरीकाले उपलब्ध गर्नु हुन्न भन्ने नै हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रीय बैङ्कले केही अल्पकालका लागि भनेर त्यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने सिद्धान्त हो । यसैले विद्यमान कानून ( नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन ) संशोधन गरेर पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गरिनुपर्छ भन्ने तर्क मौद्रिक नीतिका हिसाबले उत्तम विकल्प भने होइन ।
हालसम्म पनि यो क्षेत्रमा कथंकदाचित् वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलउपर हुन नसक्दा हुने जोखीमको कुनै चर्चा नै भएन । केन्द्रीय बैङ्कले यो क्षेत्रमा दिएको निर्देशनलाई आधार मान्दा पनि १८ जिल्लाका कामै नलाग्ने गरी क्षति भएका ५ लाख घरलाई कर्जा प्रवाह गर्न थोरै रकमले पुग्दैन । सरदर रू. १५ लाखका दरले दीर्घकालीन यस्तो कर्जा दिने नै हो भने पनि रू. ७ खर्ब ५० अर्बको आवश्यकता पर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले के आफ्ना सबै साधन यतातिर प्रवाह गर्लान् ? पक्कै गर्दैनन्/गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सरकारले नै ठूलो कोष खडा गर्नुपर्छ र त्यसैबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । भूकम्पपीडित र भूकम्पपीडितका लागि जाने कर्जाका वेदना अहिले आएर बढ्दै गरेको बैङ्कहरूको ब्याज कसरी तिर्नेमा भन्दा पनि जेजति लगानी भयो त्यसको असुली दर बिग्रन थालेपछि बैङ्कहरूले त्यसका लागि राख्नुपर्ने जोखीम व्यवस्थाले तिनका वासलातलाई कहाँ पुर्‍याउने हो त्यो चिन्ता पनि यतिखेर थपिएको छ । निश्चय नै यो सङ्कट आउनु सुखद होइन ।